देवसिद्ध खानेपानीमा अब ४५० घनमिटरको ओभरहेड टंकी | Mechikali Daily
देवसिद्ध खानेपानीमा अब ४५० घनमिटरको ओभरहेड टंकी
Posted By: Mechi Kalion: २४ पुष २०७३, आईतवार ०६:०७
बुटवल, । बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. १३ मा देवसिद्ध खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना निर्माण हुने भएको छ । सो आयोजनाको शनिबार पूर्वअर्थमन्त्री एवं रुपन्देही क्षेत्र नं. ४ का सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले शिलन्यास गरे । खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय योगिकुटीअन्र्तगत् सो आयोजना निर्माण हुन लागेको हो ।
आयोजना निर्माणका लागि डिभिजन कार्यालय र देवसिद्ध खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाबीच सम्झौता भैसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने सो आयोजनाका लागि ९ करोड ९६ लाख रुपैंया“ खर्च हुने डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । सेवा क्षेत्रमा ५० वर्षभित्र निर्माण हुन सक्ने घरधुरीलाई आंकलन गरी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष भरत पाठकले जानकारी दिए ।
आयोजना अन्तर्गत् ४५० घनमिटरको ओभरहेड टंकी निर्माण हुनेछ भने डिप ट्युवबेल, मुख्य पाइपलाइन, सार्वजनिक धारा तथा शौचालयको पनि निर्माण हुनेछ । आयोजनाबाट १३८१ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने संस्थाका सह–सचिव लोकराज शर्माले जानकारी दिए ।
संस्थाले २०६९ सालदेखि नै बोरिङबाट सिधै खानेपानी वितरण गर्दै आएकोमा आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ओभरहेड टंकीमार्फत् खानेपानी उपभोक्ताको धारमा पठाउने छ । स्थानीय उपभोक्ताले आफ्नै लगानीमा २०६७ सालमा कार्य प्रारम्भ गरी २०६९ सालबाट खानेपानी सञ्चालनमा ल्याएका थिए । हालसम्म ५१४ उपभोक्ता सदस्य रहेको संस्थामा नौं वटा सेक्टरका मेन एवं शाखा बाटोमा पाइपलाईन विस्तार गरी पानी वितरण भैरहेको अध्यक्ष पाठकले बताए ।
संस्थाले लोडसेडिङको समयमा समेत जेनेरेटर चलाएर उपभोक्तालाई पानी वितरण गर्दै आएको छ । ‘बोरिङको पानीको परीक्षण गरिएको छ । सो पानी पिउन योग्य रहेको प्रमाणित समेत भएको छ ।’ अध्यक्ष पाठकले भने । संस्थाले हाल दश हजार लिटर खानेपानी खपत गर्ने उपभोक्ताबाट मासिक १२० रुपैंया“ शुल्क लि“दै आएको छ ।
आयोजना निर्माण सम्पन्न भएर ओभरहेड टंकीमार्फत् खानेपानी वितरण हु“दा उपभोक्ताले थप सुविधा पाउने संस्थाले जनाएको छ । होभरहेड टंकीमार्फत् खानेपानी वितरण हु“दा लोडसेडिङको समयमा पनि पानी दिन सकिने तथा पानी अग्ला घरहरुमा पनि सजिलै चढ्ने सह–सचिव शर्माले बताए ।
संस्थाले खानेपानीको कामस“गै सरसफाईको कामलाई पनि स“गस“गै अघि बढाउने नीति अघि सारेको छ । उप–महानगरपालिकास“ग सहकार्य गरी फोहोरमैला व्यवस्थापनको कामलाई पनि अघि बढाइने अध्यक्ष पाठकले जनाए । ‘फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि उप–महानगरपालिकास“ग एउटा ट्रेक्टरको बजेट व्यवस्थापनको माग गरिनेछ । फोहोर व्यवस्थापनको नीति बनाई फोहोर व्यवस्थापन गरिनेछ ।’ अध्यक्ष पाठकले संस्थाको ५ औं वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि जनचेतना अभिवृद्धि तथा विभिन्न तालीमको व्यवस्था गरिनेछ ।’
यसैबीच खानेपानी आयोजनाको शिलन्यास गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री एवं सांसद पौडेलले खानेपानी नागरिकको अधिकार भएकाले यसमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए । ‘खानेपानी जनताको हक हो । यसमा सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ ।’ उनले भने । सरकारले गर्नुपर्ने काम देवसिद्धमा स्थानीय बासिन्दाले गरेको भन्दै उनले प्रशंसा व्यक्त गरे । उनले खानेपानीको डिमाण्ड शुल्क हटाउने निर्णय अघिल्लो सरकारले गरेको जनाउ“दै यसलाई अहिलेको सरकारले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताए ।
यसैगरी खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख बासुदेव पौडेलले देवसिद्ध खानेपानी आयोजनाको निर्माण निर्धारित मितिमैं सम्पन्न हुने बताए । उनले निर्माण कार्यमा सबै उपभोक्ताको रचनात्मक सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै बुटवलका पूर्वमेयर भोजप्रसाद श्रेष्ठले विकासका कामलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले मात्र हेर्न नहुने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा जिफण्ट प्रदेश नं. ६ का संयोजक कमल गौतम, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था महासंघ रुपन्देहीका अध्यक्ष ध्रुव धिताल, दिपावली सहकारीका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद न्यौपानेलगायतले बोलेका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष भरत पाठकको अध्यक्षता तथा सचिव कमल नेपालले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा स्वागत उपाध्यक्ष लाल बहादुर थापाले गरेका थिए । साधारणसभाको बन्दसत्रमा कोषाध्यक्ष डम्बर बहादुर थापाले आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । सो अवसरमा सरसफाईमा विशेष ध्यान दिने उपभोक्ता सदस्य तथा संस्थाको विकासमा योगदान दिने महानुभावहरुलाई सम्मान गरिएको थियो ।